Confirm file check o - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: confirm file check out and replace (Englisch - Burmesisch)
When the mask becomes damp, discard and replace it.
နှာခေါင်းစည်း စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်လာသောအခါ စွန့်ပစ်၍ အသစ်လဲပါ။
တပည့်တော်တို့သည် ထွက်သွား၍ နောင်တတရားကိုဟောကြ၏။
ထိုနတ်ကို နှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့အား အကျွန်ုပ်တောင်းပန်သော်လည်း သူတို့ သည် မတတ်နိုင်ကြပါဟု အော်ဟစ်လျက် လျှောက်လေ၏။
သူတို့ကို ပြင်သို့ထုတ်ပြီးလျှင်လည်း၊ သခင်တို့၊ အကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငှါ အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လေ၏။
ထိုသို့အော်ဟစ်ခြင်း၊ ကိုယ်အဝတ်ကိုချွတ်ခြင်း၊ မြေမှုန့်ကို မိုဃ်းကောင်းကင်သို့ ပစ်လိုက်ခြင်းကို ပြုကြ စဉ်တွင်၊
ဣသရေလအမျိုး၊ ယုဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်ကို ချစ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့ ရှေ့၌ ဒါဝိဒ်သည် ထွက်ဝင်တတ်၏။
Their reasoning was the earlier he went to prison, the earlier he got out and resumed his life.
ဒါ့ကြောင့် စောစောအဖမ်းခံခဲ့လျှင် စောစောပြန်ထွက်လာနိုင်ပြီး ဘ၀ကို ဆက်လက်နေထိုင်မည်ဟု သူတို့ ဆင်ခြင်ခဲ့ကြသည်။
ကိုယ်တိုင်လာပြီးလျှင် ချော့မော့သောစကားနှင့် သူတို့ကို နှုတ်ယူ၍၊ ထိုမြို့မှထွက်သွားပါမည် အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။
လုလင်တို့သည်လည်းထ၍ အလောင်းကောင် ကို အဝတ်နှင့် ပတ်ရစ်ပြီးလျှင် ဆောင်သွား၍ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။
ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည် ထွက်၍ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့ ဖျက်ဆီးရအံ့နည်းဟု တိုင်ပင်ကြ၏။
ထိုသို့စိရတောင်ကို ငါသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသဖြင့် ထွက်သွားသောသူ၊ ပြန်လာသောသူတို့ကို ပယ်ဖြတ်မည်။
ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ ထွက်ခြင်းနှင့် ဝင်ခြင်းတို့ကို ယခုမှစ၍ အစဉ်အပြတ် စောင့်တော်မူ လိမ့်မည်။
ထိုမိန်းမသည် မိမိအိမ်သို့ပြန်၍ နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်း၊ သမီးသည် အိပ်ရာ၌ အိပ်လျက် ရှိသည်ကို၎င်း တွေ့၏။
သင်၏ နေထိုင်ခြင်း၊ ထွက်ဝင်ခြင်း၊ ငါ၌အမျက် ဟုန်းခြင်းတို့ကို ငါသိ၏။
အကယ်စင်စစ်ဆိုးသောသူ၏ အလင်းသည် ကွယ်လိမ့်မည်။ သူ၏မီးလျှံမတောက်ရ။
တဖန် မျက်နှာကိုသစ်၍ ဣန္ဒြေချုပ်တည်းလျက် ပြင်သို့ထွက်ပြီးလျှင်၊ စားပွဲကို ပြင်ကြဟု အမိန့်ရှိ၏။
would you like to come (Englisch>Tagalog)come fast (Englisch>Tamilisch)sarbu aivalar meaning (Englisch>Tamilisch)canim askim (Türkisch>Englisch)dagger flour meaning in telugu (Englisch>Telugu)what is self worth (Englisch>Tagalog)luoy kaayo ko (Cebuano>Englisch)lentiggini (Italienisch>Französisch)punta ako sa weyburn (Tagalog>Englisch)salamon (Ungarisch>Wolof)ki kheyecho (Bengali>Englisch)pombala poriki (Englisch>Tamilisch)ilocano ti kapatagan (Englisch>Tagalog)what is depth perception (Englisch>Tagalog)meaning i owe you (Englisch>Tamilisch)离开【广州小包大宗收寄处理中心】 (Chinesisch (Vereinfacht)>Englisch)you're not feeling well (Englisch>Tagalog)离开上海市 发往上海浦东航站 (Chinesisch (Vereinfacht)>Englisch)chesta korbo (Bengali>Englisch)what is lead time (Englisch>Tagalog)imposta (Italienisch>Schwedisch)what the story map (Englisch>Tagalog)chimala mandu (Englisch>Telugu)well said (Englisch>Tamilisch)your'e damn cute (Englisch>Tagalog)